Archive du 20200331
Mpitatitra teny amin’ny lapan’ny tanàna Tsy voahaja ny fepetra fisorohana ny Coronavirus
Toy ireny nisy fampisehoana mpanakanto malaza ireny na kermesy rehefa fetim-pirenena nanoloana ny lapan’ny tanana Analakely omaly, rakotr’olombelona ny parvis.
Ravalomanana sy ny TIM “Hanolo-tànana izahay, aleo mifampiresaka ”
Nanolotra paik'ady hiadiana amin'ny areti-mandripaka Coronavirus ny antoko TIM ary miandry ny lamin'asa avy amin’ireo mpitondra ny Filoha teo aloha
Fanampiana ho an’ny sahirana Aterina isam-baravarana manomboka izao
Nanova paikady ny Fitondram-panjakana amin’izao herinandro niainana ao anatin’ny ady amin’ny fihanaky ny coronavirus izao.
Tsy fanarahan-dalana amin` ny fihibohana Tompona "bar" nosamborin' ny polisy
Trano fisotroan-toaka 01 tetsy 67ha nakaton' ny Polisy ary nosamborina mihitsy ilay tompony.
Fikarohana ireo olona mila atao fitiliana Natsangana ny “Brigade d’Intevention Rapide”
Ny fanapahan-kevitra noraisina tamin’ny fivoriana in-droa miantaona niarahana tamin’ny filohan’ny Repoblika,
Antsirabe Mikatona ireo tsena lehibe anio
Ho fiarovana ny amin’ny mety ho fiparitahan’ny tsimok’aretina “coronavirus” dia hitakona tanteraka ny tsena ao Sabotsy Antsirabe sy ao Antsenakely anio talata 31 martsa. Noho
Vita ny fitazonana 14 andro Hody amin’izay ireo tonga tamin’ny fiaramanidina
Nisy ezaka natao tao anatin’ny fanaraha-maso ny mpandeha avy any ivelany. Maro ny manapitra ny fepetra ny fetr’andro 14 andro amin’izao fotoana izao.
Tetikasa Miaro sy Mahalomba Ho fiarovana ny amin’ny faritra amin’ny Coronavirus
Nahetsika avokoa ireo ekipa eto an-toerana misehatra amin’ny vonjy aina (ELS) mba ho fiarovana sy ho fiatrehana ny aretina Coronavirus.
Ady amin’ ny Covid-19 Notolorana fiarovana sy fanampiana ny polisy
Tsy mitandro hasasarana fa miasa andro sy alina ary mandao ny fianakaviany mihitsy ny Polisim-pirenena amin'ny fiarovana ny ain'ny vahoaka manoloana ny valan'aretina covid19.